Ifektri ye-Laser Optics - Abakhiqizi base China Laser Optics, abahlinzeki
Ukukhanya esikunikezayo kumboza i-laser optics; isibani se-laser; ukuhlukanisa ukukhanya kwe-optics nokucubungula izinto zangaphakathi. Kubandakanya amawindi, ilensi, ama-prism. Ngokuvamile, ama-optics ethu alethwa noma ngaphandle kokufakwa njengokucela kwamakhasimende.
Ilensi yeplano-concave yinto ejwayeleke kakhulu esetshenziselwa ukukhanya nokukhanya kogongolo. Kumbozwe ukumbozwa kokuthwebula, amalensi asetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene ze-optical, lasers nasemihlanganweni.
I-DIEN TECH inikela ngezihlungi ezisezingeni eliphakeme ezisezingeni eliphakeme nezenziwe ngezifiso ngaphakathi kwebanga le-spectral kusuka ku-200 nm kuye ku-2300 nm.
Ngokuvamile, isibani se-Xenon sidinga ukuvala kushubhu yengilazi ye-quartz yama-electrode amabili ensimbi ukugcina amandla kagesi, ngemuva kwephubhu ephezulu yokugcwala egcwele ukwelashwa kwegesi ye-xenon, ukukhipha ukukhipha ukukhanya kwe-pulse light kwesibani sokukhishwa kwegesi. Xenon Lamp kabanzi laser lokuqopha umshini, laser Welding umshini, laser imishini umshini, laser ubuhle umshini. Sakha i-Xenon Lamp Ukukhetha ithubhu ye-quartz yekhwalithi yekhwalithi ye-UV njengezinto zeshubhu zekhwalithi ephezulu yamandla we-thorium tungsten, i-barium, i-cerium tungsten electrode tungsten noma i-xenon lamp electrode, enomthamo womthwalo, ikhwalithi ephezulu yepompo ye-laser beam quality, impilo ende nezinye izici .